Ama-tattoos angaphandle, ugqozi oluvela emkhathini | Ukuzidweba umzimba
Ama-tattoos angaphandle, njengoba ungacabanga, afaka izidalwa ezingavamile ezivela emkhathini. Kungakhathaliseki ukuthi ngomklamo omibalabala kakhulu noma ngombala omnyama nomhlophe, akungabazeki ukuthi lawa ma-tattoo anamathuba amaningi nokuthi singathola okuningi kuwo.
Ngalokho, Kulesi sihloko mayelana nama-tattoos angaphandle sizokhuluma ngezincazelo zawo okungenzeka, ngaphezu kokukunikeza imibono futhi sikutshele kafushane ukuthi singawasebenzisa kanjani ngokunenzuzo.. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ufunde lesi sihloko esihlobene mayelana nokukhetha ama-tattoos emkhathini: amaplanethi, osomkhathi kanye nemicabango eminingi.
1 Incazelo yama-tattoos angaphandle
1.1 Abafokazi benza umehluko
1.2 Kubalandeli bezinganekwane zesayensi
1.3 Abafokazi bangempela kakhulu
1.4 Sibancane kangakanani
1.5 Baleka kukho konke kanye nawo wonke umuntu
2 Imibono ye-Alien Tattoo
2.1 Amasoso endizayo
2.2 Abafokazi bakudala
2.3 Abahlaseli basemkhathini
2.4 Pin-up aliens
2.5 Imigqa ye-alien
3 Indlela yokusebenzisa ngokunenzuzo i-tattoo yalesi sitayela
4 Izithombe ze-Alien Tattoo
Incazelo yama-tattoos angaphandle
Akubonakali kanjalo, kodwa ama-tattoos afaka lezi zidalwa ezivela emkhathini angaba nezincazelo ezimbalwa ezihlukene. Nazi ezimbalwa, kokubili ezidume kakhulu nezingavamile kakhulu.
Abafokazi benza umehluko
Mhlawumbe enye yezincazelo ezivame kakhulu kuma-tattoos angaphandle yiyona eveza ukuthi awuyena umuntu ovamile. I-extraterrestrial ivela endaweni ekude kakhulu, kangangokuthi ngenkani kumelwe izizwe iyisihambi phakathi kwabantu. Ngenxa yalesi sizathu, ama-tattoos analezi zinhlamvu avame ukuhlobana nomuntu ongaphili ngokuvumelana nenkambiso, futhi ozibona engaziwa ngokuphelele endaweni yakhe (empeleni, i-alien isho ngokuqondile lokho ngesiNgisi).
Kubalandeli bezinganekwane zesayensi
Inganekwane yesayensi isinikeze izigcawu ezinezifiki zakho konke esikuthandayo nesingenakulibaleka. Kusuka izitsha ezimbi ze Impi Yezwe, ku-xenomorph ye Alien, ku-cerebral (kanye nezidalwa ezingenangqondo) ze Ukuhlasela kwe-Mars ngisho irobhothi lenganekwane le Iplanethi enqatshelwe. Inganekwane yesayensi igcwele izidalwa zasemkhathini zabo bonke abalingiswa nokuthandwa okungakhuthaza ucezu oluyigugu, futhi lokho, vele, kuthathe incazelo yako.
Abafokazi bangempela kakhulu
Kulabo abakholelwa ukuthi abafokazi abawona amanga, ukuthi iqiniso likhona noma abangase bacabange ukuthi bebeyizisulu zokuthunjwa kwamanye amazwe, akukho okufana nokumemeza izinkolelo zethu emhlabeni nge-tattoo enhle. Ngakho-ke, incazelo yalezi tattoos (evame ukuphefumulelwa ngabafokazi abavela endaweni engu-51 noma ngisho namasoso endizayo) ngokuvamile ihlobene nesifiso sokudlulisela emhlabeni osizungezile uzungu oluningi nokuthi kufanele ugcine amehlo akho evulekile. . .
Ngakolunye uhlangothi, ama-tattoos angama-alien angaphinde adlulisele ukuthi sincane kakhulu. I-Space yindawo enkulu kakhulu, egcwele izidalwa ezisabekayo ezingase zibe khona, ama-meteorite, amaplanethi angahlali muntu noma angahlali muntu. Siyinhlamvu yesihlabathi endaweni yonke enkulu kangangokuthi ibalekela ukuqonda kwethu, ngakho-ke i-tattoo enabafokazi noma ngisho nama-UFO ingaba ephelele ukuveza lokho kungabi namandla.
Baleka kukho konke kanye nawo wonke umuntu
Ekugcineni, ama-tattoos alesi sitayela, ikakhulukazi lawo anesoso elindizayo njengomlingiswa oyinhloko, angase futhi abhekisele esifisweni sokuphunyuka kukho konke. kanye nasemhlabeni wonke. Ngisho nomuntu ogqokile angase acabange ukuthi ikhaya labo langempela alikho eMhlabeni, kodwa emhlabeni elikude kakhulu.
Imibono ye-Alien Tattoo
Ama-tattoos angama-alien banganikeza ukudlala okuningi njengama-tattoos, njengoba imiklamo eminingi ingasetshenziswa nabo. Ngaphezu kwalokho, umbala (noma cha) nawo udlala indima ebalulekile, njengoba sizobona ngezansi nale mibono:
Ngaphandle kokungabaza, Omunye wemibono eyinhloko, kanye naleyo enikeza ukudlala okwengeziwe kuma-tattoos angaphandle, amasoso endizayo, eyaziwa nangokuthi ama-UFO. Zingabukeka zizinhle ngokumnyama nokumhlophe kanye nomdwebo olula, nakuba zihlaba umxhwele nakakhulu lapho zikhiqiza isigcawu esingokoqobo.
Ubuwazi ukuthi ukubukeka okujwayelekile kakhulu kwama-alien, okubachaza njengezidalwa ezimfishane ezinesikhumba esimpunga nezihlahla ze-alimondi, zaqala ukuvela ngekhulu le-XNUMX? KwakuseMeda: A Tale of the Future, nakuba ukubukeka kwayo kungazange kudume ngokugcwele kwaze kwaba ngemva kwesikhashana, ngeminyaka yamashumi ayisithupha ekhulwini lama-XNUMX, lapho ukuthunjwa kokuqala kwe-United States kwenzeka, okwakudlalwa uBarney noBetty Hill., umbhangqwana okusolwa ukuthi wathunjwa abantu bokufika ngobusuku obubodwa, amahora amabili. Impela kukhona okufanele ukukhumbule ku-tattoo!
Umdlalo wevidiyo owaziwa kakhulu lapho abafokazi behlanganyela khona, I-Space Invaders inobuhle okubonakala kakhulu futhi isebenza kahle kakhulu kokubili kokumnyama nokumhlophe kanye nokuthinta umbala.Nakuba, yebo, bahlala bebukeka kangcono kumklamo olula.
Izitayela zomdabu nezikhonkwane zibukeka zizinhle kumatattoo anabalingiswa abaphina phezulu, kungaba ngosomkhathi noma ama-alien. Ngemigqa ewugqinsi nemibala evuthayo, lawa ma-tattoos abukeka emuhle ngokusikisela kwawo-XNUMXs sci-fi, njengezibhamu ezihlanyayo, amasudi e-diving angenakwenzeka kanye nezilwane ezingaziwa ezinesikhumba esiluhlaza.
Imigqa yamaNazca kuthiwa idwetshwe ngabafokazi. Futhi nakuba kwakungenjalo (ziyi-geoglyphs ezidalwe ukuze zihlanganise ukubonakala kwamanzi noma njengenkokhelo yokuthi onkulunkulu bawabone esibhakabhakeni), bapholile kakhulu ku-tattoo, ngokunembile ngenxa yokulula kwabo. Ngaphezu kwalokho, unezizathu eziningi zokukhuthazwa: izinkawu, ama-hummingbirds, izinja ...
Indlela yokusebenzisa ngokunenzuzo i-tattoo yalesi sitayela
Ama-tattoos angama-alien anikeza umdlalo omningi, njengoba isikhala sinezici eziningi ezihlukene: ingaba nemibala egqamile, kodwa futhi ihluzekile, ingenziwa lula kakhulu, kodwa iphinde yenziwe kabusha kubo bonke ubukhazikhazi bayo.
Ngakho, Kuye ngesitayela kanye nohlobo lwe-tattoo oyikhethayo, kuyoba kuhle ukuthi ulandele iseluleko esithile noma abanye. Isibonelo, ngemiklamo elula zama ukuthi ama-aliens awaningi kakhulu. Idizayini yakudala enobuso obude namehlo e-alimondi ilungele lolu hlobo lwe-tattoo, kanye nama-UFO anemigqa emihle nemininingwane encane.
Ngakolunye uhlangothi, ama-tattoos angokoqobo kakhulu angasebenzisa umbala nezitayela ezihlukahlukene. Okwangempela kubukeka kukuhle ekukhiqizweni kabusha kwamamuvi afana ne-Alien, kuyilapho isitayela somdabu sipholile kakhulu kumadizayini afuna ukuthintwa iphinikhodi.
Ngaphandle kokungabaza, ama-tattoos angama-alien apholile kakhulu futhi anezincazelo eziningi kunokuhlangabezana neso, iqiniso? Sitshele, ingabe unayo i-tattoo yalesi sitayela? Ingabe ukhethe isitayela esithile? Kusho ukuthini kuwe?
Izithombe ze-Alien Tattoo
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Umlingiswa Tattoos » Ama-tattoos angaphandle, ugqozi oluvela emkhathini